इन्फोडेभलपर्स : स्वदेशी सफ्टवेयर निर्माणमा परिचित नाम « Tech News Nepal
इन्फोडेभलपर्स : स्वदेशी सफ्टवेयर निर्माणमा परिचित नाम
शुक्रबार, बैशाख १६, २०७९
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगमा ‘इन्फोडेभलपर्स’ ब्राण्ड पक्कै नयाँ होइन । स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रसङ्ग आउनासाथ धेरैले यो कम्पनीको नाम लिन्छन् । १९ वर्षदेखि सफ्टवेयर निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील इन्फोडेभलपर्सले विशेषगरी लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाका लागि कोर बैंकिङ सिस्टम निर्माण गर्दै आएको छ ।
साथै कम्पनीले वित्तीय संस्थाका लागि मोबाइल बैंकिङ सोलुसन्स, ट्याब्लेट बैंकिङ, मर्चेन्ट बैंकिङ, क्लाउडमा आधारित वित्तीय सेवा डटकम, एटीएम सेवासमेत ल्याएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न सरकारी परियोजनामा काम गरी सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल रुपान्तरण गर्ने अभियानमा समेत सरिक छ । आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणित आईसीटी कम्पनीका रुपमा इन्फोडेभलपर्सले भारत, भुटान र अमेरिकामा पनि व्यवसाय विस्तार गरेको छ ।
कम्पनी सुरुवातको रोचक कहानी
धेरैजसो आईटी कम्पनीको सुरुवात एउटा कोठा र कम्प्युटरबाट हुने गरेको पाइन्छ । आजको इन्फोडेभलपर्सको सुरुवाती कहानी पनि उस्तै छ । २०५९ असार २१ मा सफ्टवेयर कम्पनीका रुपमा यसको यात्रा सुरु भयो ।
कम्पनीका संस्थापक हुन्, उमेश रघुवंशी । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत हुँदा उनले आफ्नै कोठामा यो कम्पनी खोलेका थिए । अनि सुरुवाती लगानी थियो, ६५ हजारको कम्प्युटर ।
यही कम्प्युटरबाट रघुवंशी र इन्फोडेभलपर्सको व्यवसायिक यात्रा अगाडि बढ्छ । केही समयपछि दुई साथी प्रविन सुवेदी र अर्विन्द प्रधान कम्पनीमा जोडिए ।
यी तीन भाइ आफैंले सिस्टम डिजाइन र डेभलप गर्थे, अनि ग्राहक खोज्दै बजार दौडन्थे । पछि रघुवंशीले पनि बैंकको जागिर छोडे र तीन जनाले नै कम्पनीमा फुलटाइम दिएर काम गर्न थाले ।
न्यूनतम स्रोत र साधनबाट अगाडि बढेको इन्फोडेभलपर्सले एकपछि अर्को परियोजनामा काम गर्न थाल्यो । सुरुमा औषधि व्यवसायीका लागि फुल अकाउन्टिङ सफ्टवेयर ‘फर्मा प्रो’ निर्माण गर्‍यो । तर सफलता भने पाउन सकेन ।
कम्पनीका सुरुवातकर्ता सबै ‘टेक्नोक्र्याट’ थिए । कम्पनीलाई व्यावसायिक मोडलमा कसरी लैजाने भन्ने अनुभव थिएन । गर्दै, सिक्दै अघि बढे । त्यसपछि कम्पनीले निर्माण गरेका सहकारीका सफ्टवेयरले बजार लिन थाल्यो ।
सहकारी संस्थाका लागि ल्याएको ‘फिनसिस’ सफ्टवेयरले राम्रै व्यवसाय दियो । यसपछि भने कम्पनीले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
‘६५ हजारको कम्प्युटरबाट सुरु गरिएको कम्पनीले हरेक वर्ष नयाँ आकार लियो । हामीले आ-आफ्नो काम बाँड्यौं । विभिन्न सहयोगी हात बढे । टिम ठूलो हुँदै गयो । बजार र ग्राहकले पत्याए,’ सीईओ रघुवंशीले विगत सुनाए ।
मुख्य उत्पादन र सेवा
‘फर्मा प्रो’ बाट सुरु भएको इन्फोडेभलपर्सको सफ्टवेयर निर्माण यात्राले १९ वर्ष पार गरिसकेको छ । यसबीचमा कम्पनीले वित्तीय संस्थाका लागि दर्जनौं सफ्टवेयर र र बैंकिङ सोलुसन्स ल्यायो ।
सहकारीका लागि विकास गरेको फिनसिस सफ्टवेयर सयौं संस्थामा प्रयोगमा आयो । फिनसिसको सफलताले अरू बैंकिङ सोलसुन ल्याउने ऊर्जा टिमलाई दियो ।
यसपछि कम्पनीले लघुवित्त संस्थाका लागि इन्टिग्रेटेड सोलुसन्स प्लेटफर्म निर्माण गर्‍यो । यहीबेला इन्फोडेभपर्स आन्तरिक राजस्व विभाग, सेभ द चिल्ड्रेन, लोक सेवा आयोग, नेपाल बैंकजस्ता सरकारी र गैरसरकारी एजेन्सीका राष्ट्रियस्तरका सफ्टवेयर परियोजनामा आबद्ध भयो ।
अहिले कम्पनीले फिनसिस सफ्टवेयरलाई रिप्लेस गर्दै सहकारी संस्थाका लागि इनफिनिटी कोर बैंकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने लघुवित्त संस्थाका लागि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसका रुपमा इमपावर प्रयोगमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले क्यापिटल मार्केटका लागि पनि काम गरिरहेको छ । पोर्टफोलियो म्यानेजरका लागि इन्फोडेभलपर्सले ल्याएको वेल्थ मर्चेन्ट बैंकिङ सिस्टम नेपालका ९८ प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजरको बिजनेसमा प्रयोग भइरहेको रघुवंशीले जानकारी दिए ।
‘अहिले कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोतमध्ये ‘वेल्थ’ एक हो,’ उनले भने ।
बजारमा यी मुख्य उत्पादनसहित कम्पनीले मोबाइल बैंकिङ सेवा एमडबली पनि ल्याएको छ । यो सेवाबाट बैंकका ग्राहकका लागि चौबिसैं घण्टा बैंकिङ र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट र एसएमएमएस दुवैमा चल्ने ‘एमडबली’ मा विभिन्न सेवा भुक्तानी गर्न, बैंकको फन्ड ट्रान्सफर गर्न, एयरलाइन्सको टिकट, कर्जाको जानकारी लिन/भुक्तानी गर्न, वालेट लोड, रेमिट्यान्स आदि सेवा लिन सकिन्छ ।
त्यस्तै कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका लागि एससीटी र युनियन पे नेटवर्कको सहकार्यमा एटीएम सेवा पनि सुरु गरेको छ भने चाँडै नै भिषको नेटवर्क पनि जोडिने क्रममा रहेको रघुवंशीले जानकारी दिए ।
कम्पनीले ल्याएको अर्को नयाँ उत्पादन हो, ‘इन्फोट्याब’ । यो बैंकिङ मोडल हो, जसमा बैंकहरुले बैंक एजेन्टबिना नै वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । यो मोडलले बैंकको आधिकारिक शाखा स्थापना गर्न नमिल्ने क्षेत्रहरुमा पनि सेवा दिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
अनलाइन र अफलाइन दुवै मोडमा चल्ने यो सेवामा पनि फन्ड ट्रान्स्फर, रिचार्ज र टपअप, अनलाइन टिकट, रकम जम्मा गर्न र निकाल्न सकिनुका साथै वित्तीय संस्थाको ऋण पनि यही माध्यमबाट तिर्न सकिन्छ ।
साथै कम्पनीले ब्रान्चलेस बैंकिङ, बजेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, ई- रिकन्सिलेसन सिस्टम, अनलाइन रिक्र्युटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लगायतमा पनि काम गरिरहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले अघि सारेको नेपाल गभर्नेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको काम समेत इन्फाेडेभलपर्सले गरिरहेको छ ।
लोकसेवा आयोग, नागरिक लगानी कोष, यातायात कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयले पनि इन्फोडेभलपर्सले बनाएको ईआरपी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
यसका साथै कम्पनीले मोबाइल एप डेभलपमेन्टमा केन्द्रित रहेर कार्य गरिरहेको छ भने हाई-इन्ड वेबसाइट डेभलपमेन्ट र कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका परियाेजना पनि गरिरहेको छ ।
३०० बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी
सफ्टवेयर कम्पनीको रुपमा सयौंलाई एकसाथ रोजगारी दिने कम्पनी नेपालमा कमै छन् । इन्फोडेभलपर्सले हाल तीन सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । कम्पनीमा जोडिएका कर्मचारीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत प्रविधि क्षेत्रका छन् भने अन्य बिजनेश, फाइनान्स र प्रशासनतर्फ छन् ।
११ सय क्लाइन्ट, ३५ लाख सेवाग्राही
कम्पनीले ल्याएका विभिन्न सफ्टवेयर, इन्टिग्रेटेड सोलुसन्स तथा अन्य सेवाका प्रत्यक्ष क्लाइन्ट (संस्था) ११ सयभन्दा बढी पुगेको सीईओ रघुवंशीले बताए । यी सेवाबाट हाल ३५ लाख बढी प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेका छन् ।
आज देशका अधिकांश ठूला सरकारी संस्था र डेभलपमेन्ट एजेन्सीले इन्फोडेभलपर्सको सफ्टवेयर र बैंकिङ सोलुसन्स प्रयोग गरिरहेका छन् । फलस्वरुप कम्पनी १० करोड बराबरको वार्षिक टर्नओभर (कारोबार) गर्न सफल भएको छ ।
आईएमई ग्रुपको संलग्नता
स्वदेशी आईटी उद्योगमा क्रियाशील इन्फोडेभलपर्समा हालै आईएमई ग्रुपको लगानी भित्रिएको छ । स्थापनाको १९ वर्षपछि कम्पनीले देशकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई लगानीकर्ताको रुपमा पाएको हाे ।
‘आईएमई ग्रुपजस्तो प्रतिष्ठित नामसँग जोडिन पाउनु नै हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो,’ रघुवंशीले भने, ‘उहाँहरुको प्रस्ताव ठीक लाग्यो र एउटै टिममा जोडिन राजी भयौं ।’
आईएमई ग्रुपसँगको सहकार्य पैसाका लागि भन्दा पनि सेवा र व्यवसायको दायरा बढाउन गरिएको उनको भनाइ छ ।
कर्पोरेट प्रणालीको अभ्यास
तीन सय बढीको टिम र दर्जनौं उत्पादन र परियोजनालाई व्यवस्थापन गर्न कम्पनीले कर्पोरेट प्रणालीको अभ्यास गर्न थालेको छ । यसका लागि विभिन्न विभाग र बिजनेस युनिट विभाजन गरी प्रत्येकलाई फरक-फरक भूमिका दिइएको छ ।
टेक्निकल, बिजनेस लगायत विभिन्न विषयमा फरक नेतृत्व र टिम बनाउँदा कम्पनीलाई आफ्नो उचाइ प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
आईएमई ग्रुपको लगानी भित्रिएसँगै इन्फोडेभलर्सको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रुद्र पौडेल र अजित बगाले थपिएका छन् । हालै कम्पनीले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी डा. राजिव सुब्बालाई चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) को रुपमा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै चिफ टेक्नाेलाेजी अफिसर (सीटीओ) नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा कम्पनी छ ।
यसरी कर्पोरेट प्रणालीमा संगठनको संरचना तयार पारी अघि बढ्ने योजनामा कम्पनी देखिएको छ ।
‘हामी सहभागितामूलक ‘नेतृत्व शैली’ मा विश्वास गर्छौं । कम्पनीले प्रत्येक टिम मेम्बरको क्षमतालाई मूल्यांकन गर्दछ र विभिन्न प्रोजेक्ट र निर्णयमा उनीहरुलाई सहभागी गराउने गर्दछ । यसर्थ कर्मचारीहरुले पनि निर्णय प्रक्रियामा योगदान दिनसक्ने व्यवस्था इन्फोडेभलपर्समा रहेको छ,’ रघुवंशीले भने ।
अवार्ड एवं सम्मान
इन्फोडेभलपर्सले केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानसमेत पाएको छ । सन् २०१६ मा कम्पनीले एसियाका आईटी संघ/समूहरूहरूको संस्था एसियन ओसियनियन कम्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (एसोसिओ) ले सन् २०१६ मा इन्फोडेभलपर्सलाई ‘एसोसिओ आउटस्ट्यान्डिङ आईसीटी कम्पनी अवार्ड’ ले सम्मान गरेको थियो ।
यो अवार्डबाट कम्पनीलाई अन्तर्राष्टिय रूपमा पहिचान दियो । फलस्वरूप नेपाल बाहिर पनि आफ्नो व्यवासय विस्तार गर्ने अवसर मिल्यो ।
त्यस्तै यो कम्पनीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट ‘बेस्ट इन्नोभेटिभ आईसीटी कम्पनी २०१६’ प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै कम्पनीले २०१७ मा क्यान फेडेरेसन ‘बेस्ट आईसीटी युजर्स अवार्ड’ पनि प्राप्त गर्‍यो ।
पब्लिक कम्पनी बन्ने योजना
६५ हजारको पुँजीलाई करिब १० करोडमा विस्तार गरेको यो सफ्टवेयर कम्पनीको अबको योजना पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्नु हो ।
‘आउँदो दुई-तीन वर्षभित्रै लिमिटेड कम्पनी बन्ने योजना छ । अबको जमानामा कम्पनी ठूलो हुने भनेकै क्यापिटल मार्केटमा जाँदा हो । यसका लागि हामी योजनाबद्ध रुपले काम गरिरहेका छौं,’ रघुवंशीले सुनाए ।
व्यावसायिक कम्पनीको रुपमा काम गरिरहँदा इन्फोडेभलपर्सले नेपालको डिजिटल रुपान्तरणको यात्रामा थोरबहुत योगदान पुर्‍याएको छ । अझै धेरै जिम्मेवारी र अवसर कम्पनीसँग छन् । आगामी दिनमा पनि निरन्तर फिनटेक क्षेत्रका साथै सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रका लागि नवीनतम सेवा ल्याउने ध्याउन्नमै कम्पनी हुनेछ ।
अझै मार्केट सेयर बढाउने, ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनेलगायतका कम्पनीका योजना छन् । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बजारको आवश्यकता अनुसार शाखाहरु विस्तार गर्ने योजना समेत कम्पनी ल्याएको छ । हालै इटहरीमा कम्पनीको नयाँ शाखा विस्तार भएको छ ।
‘स्वदेशी सफ्टवेयर र स्वदेशी जनशक्तिमा विश्वास दिलाउन कम्पनीले थप मेहनत गर्नेछ,’ सीईओ रघुवंशीले अन्त्यमा भने, ‘थुप्रै चुनौती छन्, तर हामीसँग बलियो टिम र स्पष्ट रणनीति छ । लक्ष्यमा पुग्ने नै छौं ।’
काठमाडौंको सडकमा गुड्न थाले साझाका बिजुली बस
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातले औपचारिक रुपमा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीबार
काठमाडौं । यतिबेला विश्वमा मोबाइल ब्रोडब्याण्डको पाँचौ पुस्ता अर्थात् फाइभजी विस्तार भइरहेको छ । कतिपय
नेपालको साइबर ब्यूरोलाई दक्षिण कोरियाको १ अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली सहयोगमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोको स्तरोन्नति हुने भएको
ब्यालेन्सबाट सेवा खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था खारेज, एनसेलका केही भ्यास तत्काललाई रोकिने
काठमाडौं । प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने प्रावधानसहित नेपाल
कुनै पनि वेबसाइटलाई मोबाइल एपका रूपमा चलाउने स्मार्ट तरिका
अव्यवस्थित तार हटाउँदै काठमाडौं महानगर, सहरको सुन्दरता बढाउन तार भूमिगत गर्ने योजना
गुगलमा व्यक्तिगत डेटा देखियो ? अब आफैंले हटाउन मिल्ने
लाइका क्यामेरा भएको पहिलो साओमी स्मार्टफोन विश्वबजारमा नआउने